MUSIIBO: Nathaniel Clyne Oo Muddo Saddex Bilood Oo Kale Ah Garoomada Ka Maqnaan Doona Iyo Xaaladiisa Oo Sii Xumaatay. – WWW.Gool24.net
MUSIIBO: Nathaniel Clyne Oo Muddo Saddex Bilood Oo Kale Ah Garoomada Ka Maqnaan Doona Iyo Xaaladiisa Oo Sii Xumaatay.
Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool ayaa helay war xun oo ayna doonayn in ay maqlaan kadib markii uu Nathaniel Clyne oo aan xili ciyaareedkan hal daqiiqo ciyaarin uu markale soo gaadhay dib u dhac wayn oo uu waqti dheer la sii maqnaan doono. Intii lagu jiray kulamadii xili ciyaareedkan ka horeeyay ayuu Nathaniel Clyne soo gaadhay dhaawac uu ilaa hadda la maqan isla markaana uu muddo kale oo dheer la sii maqnaan doono.
Wargayska Daili Mirror ayaa shaaciyay in Nathaniel Clyne uu qaliin u maray dhaawicii dhabarka ka soo gaadhay isla markaana la filayo in uu muddo saddex bilood oo kale ah uu garoomada ka sii maqnaan doono. Rajadii uu xidiga ree England ee Nathaniel Clyne uu ka qabay koobka aduunka ayaa sii xumaatay.
Jurgen Klopp ayaan hore liiska kooxdiisa Liverpool ee Champions Leaque ugu soo darin Nathaniel Clyne maadaama oo la ogaa in uu waqti dheer garoomada ka maqnaanayo laakiin waxaa la filayay in liiska labaad ee Bisha January la gudbiyo uu ku soo bixi doono haddii ay Liverpool u soo baxdo wareega 16 ka kooxood ee Champions Leaque.
Jurgen Klopp ayaa ku baxsaday in uu booska difaaca midig ee uu Clyne ka dhaawacan yahay uu ka soo wada ciyaarsiinayay da’yarka Trent Alexander-Arnold iyo Joe Gomez isaga oo waliba u kala qaybiyay kulaamda Premier Leaque iyo Champions Leaque.
Da’yarka Trent Alexander-Arnold ayaa wacdaro ka soo dhigay kulamadii Champions Leaque ee uu ka soo ciyaaray isaga oo waliba muujiyay sida uu ugu adkaysan karo cadaadiska tartanka kubbada cagta ugu xiisaha badan laakiin Joe Gomez ayaa isna Klopp ka caawiyay in aanu u baahan adeegii Clyne kaas oo boos joogto ah ku haystay shaxda macalinka ree Germnay.
laakiin iyada oo Nathaniel Clyne uu markale sii maqnaan doono ilaa ugu yaraan bisha Febuary ee sanadka cusub waxa uu Klopp ku sii tiirsanaan doonaa bandhiga Trent Alexander-Arnold iyo Joe Gomez laakiin Clyle oo rajaynayay in uu ka soo laabto dhaawac uu ku seegay dhamamaan kulamadii xili ciyaareedkan ayaa niyadjab cusub la kulmay.
Dhinaca kale Sadio Mane ayaa maanta dib ugu soo laabtay kooxdiisa Liverpool iyada oo baadhitano dheeraad ah lagu samayn doono xaalada dhaawac cusub oo kaga soo laabtay muruqii uu dhawaan dhaawiciisa ka soo kacay laakiin Klopp ayaa muujiyay sida ay kooxdiisu uga shaqayn doonto xaalada Sadio Mane.